Soo-saaraha Soolarka Shiinaha iyo Soo-saare | Xinneng
In ka badan 10 sano waxaan soo saareynay tayo sare oo naqshadeysan lana dhisay baalal qoraxda wax ku ool u ah oo laga iibiyay adduunka oo idil.
Qalabkayagu wuxuu ka samaysan yahay muraayad qabow leh oo leh iftiin sare, EVA, unugyada qorraxda, gadaal, aluminium isku dhafan, Isgoyska Sanduuqa, Silica gel.
Waxaan dammaanad ka qaadeynaa goleyaashayada muddo 25 sano ah.
Wax soo saarkayaga waxaa loo dhoofiyaa Yurub, Bariga Dhexe, Afrika, Koonfurta Ameerika iyo dalal kale oo Aasiya ah.
Unugyada cadceedda, oo sidoo kale loo yaqaan "qorraxda qorraxda" ama "sawir-gacmeedyada", ayaa ah xaashiyaha sawir-koronto ee loo adeegsado iftiinka qorraxda si toos ah loogu soo saaro koronto. Unugyada qorraxda ee keliya looma isticmaali karo si toos ah ilaha tamarta. Il ahaan awoodeed, dhowr unug oo qorraxda oo keliya ah waa inay ku xirnaadaan taxane, kuna xirmaan isbarbar socda si adagna loogu xiray qaybaha.
Qaybaha cadceedda (sidoo kale loo yaqaanno modules unugyada qorraxda) waxaa soo ururiyey unugyo badan oo qorraxda ku shaqeeya, kuwaas oo ah qaybta ugu muhiimsan nidaamka tamarta qorraxda iyo qaybta ugu muhiimsan nidaamka tamarta qorraxda.
Waxyaabaha ka kooban qoraxda iyo shaqooyinka
(1) Muraayad dabacsan: Shaqadeedu waa inay ilaaliso jirka ugu muhiimsan ee dhalinta korontada (sida unugga), xulashada gudbinta iftiinka ayaa loo baahan yahay: Wareejinta iftiinka waa inuu ahaadaa mid sarreeya (guud ahaan ka sarreeya 91%); daaweyn cad cad
(2) EVA: Waxaa loo isticmaalaa in lagu dhajiyo oo lagu hagaajiyo muraayadda la qaboojiyey iyo jirka ugu weyn ee dhalinta tamarta (unug).
(3) Unugyada: Shaqada ugu weyn waa soo saarista koronto.
(4) Diyaarad-dhabarka: Waxqabadka, shaabadaynta, dahaadhka iyo biyaha.
(5) Aluminium aluminium: ilaali laminate-ka, door gaar ah ka ciyaara shaabadaynta iyo taageerida.
(6) Sanduuqa Iskudhafka: ilaali dhamaan nidaamka dhalinta korontada una shaqee idaacada hada.
(7) Silica gel: saameynta xiritaanka
Qalabka korontada ku shaqeeya ee loo yaqaan 'solar solar' waxay u kala baxaan qaybaha cadceedda ku shaqeeya ee loo yaqaan 'monocrystalline silicon qoraxda' iyo polycrystalline silicon qoraxda. Waxtarka beddelka sawir-koronto ee biraha qorraxda ee monocrystalline silicon-ka ayaa ka sarreeya kan looxyada qorraxda ee polycrystalline silicon. Awoodda iyo wattiga qorraxda ayaa la habeyn karaa, badanaa laga bilaabo 5watt ilaa 300watt. Qiimaha baalayaasha qoraxda waxaa loo xisaabiyaa watt.
Qalabka monocrystalline ee qoraxda
Waxtarka beddelka sawir-koronto ee biraha qoraxda ee monocrystalline silicon waa qiyaastii 15%, kan ugu sarreeyaana waa 24%. Tani waa tan ugu sarreysa ee beddelka sawir-koronto ee dhammaan noocyada baararka qoraxda, laakiin qiimaha wax soo saarku waa mid aad u ballaaran oo aan si ballaaran oo ballaaran loo isticmaali karin. Si aad u isticmaasho. Maaddaama silikoon monocrystalline guud ahaan lagu soo koobay muraayad adag iyo cusbi aan biyuhu la socon, waa mid waara oo wuxuu leeyahay nolol adeeg illaa 15 sano ah, iyo ilaa 25 sano.
Qalabka qoraxda ee loo yaqaan 'polycrystalline silicon'
Nidaamka wax soo saarka ee silsiladaha qorraxda ee loo yaqaan 'polycrystalline silicon qoraxda' waxay la mid tahay tan baalayaasha qorraxda ee monocrystalline silicon, laakiin waxtarka beddelidda sawir-koronto ee baalayaasha qorraxda ee loo yaqaan 'polycrystalline silicon qoraxda' waa in wax badan la dhimaa, iyo waxtarka beddelidda sawir-korontokeedu waa 12% (July 1, 2004 , Waxqabadka Japan Sharp waa 14.8%. Waxtarka ugu sareeya adduunka polysilicon qoraxda). Marka la eego qiimaha wax soo saarka, way ka jaban tahay monocrystalline silicon solar panel, maaddadu way fududahay soo saarideeda, waxay keydineysaa isticmaalka korontada, wadarta qarashka waxsoosaarkuna wuu ka hooseeyaa, marka waxaa lagu soo saaray qadar aad u badan. Intaa waxaa sii dheer, nolosha adeegga ee silsiladaha qorraxda ee loo yaqaan 'polycrystalline silicon solar' waa ka gaaban tahay tan monocrystalline silicon qoraxda. Marka la eego waxqabadka kharashka, monocrystalline silicon qoraxda ayaa waxoogaa ka fiican.
Poly 60 Unugyada oo dhan
Awoodda ugu badan ee STC (Pmax)
Danab Operating fiicnayn (Vmp)
Hawsha Ugu Wanaagsan ee Hawlgalka (Imp)
Furan Wareegga Wareegga (Voc)
Xilliga Gaaban ee Gaaban (Isc)
Heerkulka Shaqada ee Module
-40 ° C illaa +85 ° C
Danab System Ugu badnaan
Qiimeynta Fiyuusta Taxanaha Ugu Badan
Xaaladda Imtixaanka Heerka (STC)
lrradiance 1000 W / m 2, heerkulka moduleka 25 ° C, AM = 1.5; Dulqaadka Pmax, Voc iyo Isc dhamaantood waxay kujiraan +/- 5%.
Mono 60 Unugyada oo dhan
Heerka Imtixaanka Heerka (STC) lrradiance 1000 W / m 2, heerkulka moduleka 25 ° C, AM = 1.5; Dulqaadka Pmax, Voc iyo Isc dhamaantood waxay kujiraan +/- 5%.
Sawir Dheeraad ah
Sawirada Soo Saarka Warshada
Hore: Generator Nooca Aamusnaanta
Xiga: Generator Nooca Gawaarida
100w Guddiyada Cadceeda
300 Watt Guddiyada Qorraxda